နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၇) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on March 3, 2015 at 11:07 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၂၇) မှာတော့ အရာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုရာတွင် သုံးနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Jean : I think this material is much prettier than that, don't you?
Lois : Well, I don't know. I like them both. Why do you like that one better?
Jean : Well, the design is more interesting and the colors are brighter. And it's not as expensive, either.
Lois : Oh, I see what you mean. And besides, these colors are more becoming to you.
Jean : Do you really think so? I’ll buy it then.
I think this material...
အင်္ဂလိပ် လို ပိတ်စကို material လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ မှာ conjunction "that" ကို casual conversation လိုသဘာဝကျကျ ပြောတဲ့ အခါ ဖြုတ်ပြောရတယ်။ အရေးအသား မှာဆိုရင်တော့ ဒီလိုရေးကြတယ်။ I thank that this material is much prettier…
Much (intensifier) ဆိုတာကို အများကြီး ပိုသာတယ် လို့ ပြောချင်တဲအခါ comparative adjective တွေနဲ့ တွဲသုံးရတယ်။ Much လိုဘဲalot ကိုလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
much more dif­ficult,
much less useful
a lot prettier,
a lot more practical,
That = that material. (…is much prettier than that)
ဒီမှာတော့ that က that material ကိုဆိုလိုတာ။ casual conversation လိုသဘာဝကျကျ ပြောတဲ့ အခါ နားလည်ပြီးသားဖြစ်လို့ ဖြုတ်ပြောရတယ်။
Don't you? မှာ Don't ကိုအသံ မြှင့်ပြောရတယ်။ Sentence အဆုံးမှာထည့်ပြောတဲ့ don't you ဟာ true question ဖြစ်တဲ့ အတွက် အမေးခံရသူက ပြန်ဖြေဖို့လိုပါတယ်။
I like them both = I like both of them.
That one refers toapiece of material apparently near the first speaker, who referred to it as "this material."
နှစ်ခုစလုံး ကိုကြိုက်တယ် လို့ပြောရင် အပေါ်က အတိုင်း ၂ မျိုးစလုံးပြောလို့ရတယ်။ အရာဝထ္ထုတွေကို ညွှန်ပြတဲ့အခါ စကားပြောသူက သူနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ အရာကို this နဲ့ ပြောပြီး အဝေးမှာ ရှိတဲ့အရာကို that နဲ့ပြောရတယ်။
(I think this material is…/ Why do you like that one better?)
I see what you mean = I understand (why you like it).
မင်းဘာကိုဆိုလိုသလဲ ဆိုတာငါသိပြီ။ သဘောပေါက်ပြီ လို့ဆိုလိုတာ။
These colors are more becoming to you.
Becoming to (adjective) ဆိုတာ လိုက်ဖက်တယ် လို့ပြောတာ။ "are" အပေါ်မှာ strong stress ထည့်ပြောတာဆိုရင် ဒါကမှ မင်းနဲ့လိုက်တာ လို့ပြောချင်တာပေါ့။
Her new hairstyle was very becoming to her.
Julia M. Dobson နှင့် Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ်မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Talking about protest (ဆန္ဒပြခြင်း)
ပြဿနာရှိစေသော စကားလုံးနှင့် စကားစု (၃၀)
Permalink Reply by Winmyint Naing on March 3, 2015 at 20:52
Permalink Reply by mayri on March 4, 2015 at 9:37
Permalink Reply by Zaw Min Aung on March 4, 2015 at 11:41
Permalink Reply by Kyaw Htet Naing on March 13, 2015 at 21:05
I get the uses of the words that I don't know before.
Permalink Reply by Nay Min Aung on April 22, 2015 at 16:59
Permalink Reply by Zu Zu on April 28, 2015 at 3:49